အကယ်၍ သင်သည် "Showtime" အထူးအစီအစဉ်ကို Nofap တွင်လွဲချော်လျှင် - Brain On Porn
အကယ်၍ သင်သည်“ Showtime” အထူးအစီအစဉ်ကို Nofap တွင်လွဲချော်လျှင်…
သငျသညျယခုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အဆိုပါ "အပိုင်း2ရုပ်ပုံများ" အသင်းရှိကြောင်း Pittsburgh, Pennsylvania ပြည်နယ်မှတိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းမှအတော်ကြာ NoFap အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါများ၌ဆောင်ခဲ့လေ၏။ အောက်တွင်သုံးသပ်ချက်။ ဤနေရာတွင် Watch: ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်း 6
ဇာတ်လမ်းတွဲအပြည့်အစုံကို“ Showtime” တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ (အကယ်၍ သင်မှာယူမှုမရှိပါကသင်သည်တစ်လကြာအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်) ။ သို့သော်၊ ၎င်းတွင် porn အစပျိုးမှုများစွာရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ပြန်လည်နာလန်ထူလာသူမည်သူမဆိုကိုမထောက်ခံပါ။ သင်ဤခလုတ် - အခမဲ့နောက်တွဲယာဉ်ကနေနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ် သော်လည်းဤချိတ်ဆက်.
အမှောင် Net ကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: စိတ် "Rewire"
၏ပုံမှန်အတိုင်း, ဒီရက်သတ္တပတ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ် အမှောင် Net က ကြီးမားတဲ့လမ်းအတွက်အချို့အလွန်ခေတ်မီနည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။ ရဲ့ငုပ်နှင့်စူးစမ်းခဲ့သည်ဘယ်အရာကိုမြင်ကြကုန်အံ့ "Rewire ။ "
ပုံမှန်ခုနှစ်တွင် အမှောင် Net က စတိုင်, "Rewire" လူအပေါင်းတို့သည်ကျယ်ပြန့်ထီးအောက်မှာယေဘုယျအားဖြင့်, fit ကြောင်းအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောပုံပြင်များအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ သငျသညျဖြစ်နိုင်ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်ကနေပြောပြနိုင်သကဲ့သို့ "Rewire" ကကွဲပြားခြားနားစေဦးနှောက်ကိုအင်တာနက်များ၏အယူအဆမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ "Re-ဝါယာကြိုး" စိုးရိမ်။
"Rewire" တွင်ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲသောသူလူငယ်တစ်ဦးသည်လူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီနေ့ရဲ့အသက်အရွယ်မှာတော့ဒီအားလုံးရှားပါးခွအေနအေမှာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်လူဆင်းရဲခံရအခြားစွဲလမ်းအဖြစ်ဆက်ဆံဖို့နည်းတူအရေးကြီးပါတယ်။ ဤသည်လုလင်ကိုခံစားနေရသူကိုအခြားသူများနှင့်အတူလုံခြုံလမ်းအတွက်သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းကျော်က get ကူညီရန်အလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းအွန်လိုင်းမှပြန်လည်နာလန်ထူအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနှင့်သန်းကျော်အသုံးပြုသူများကထိုအအွန်လိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းသုံးစွဲဖို့စတင်ခဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါအုပ်စုများတစ်ခုမှာ, NoFap "reboot" သူတို့ကဦးနှောက်နိုင်ရန်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကနေ disconnect နှင့်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစွဲ၏ရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုကိုပယ်ရှားရန်ကြိုးစားသည်။ ရုံမဆိုစွဲနှင့်အတူလိုပဲအုပ်စုရှိသူတို့တချို့၏ပုံပြင်များကြားနာမယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ခံစားမှုဖြစ်ပါသည်, ငါတကယ်ဇာတ်လမ်းတွဲပင်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ဤရှုထောင့်တီထွင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့အလိုရှိ၏။
ပထမဇာတ်လမ်းသည် ဦး နှောက်ကို“ rebooting” လုပ်ခြင်းနှင့်အခြေခံများသို့ပြန်သွားခြင်းများဖြစ်သော်လည်း“ Rewire” မှအခြားဇာတ်လမ်းသည်မှတ်ဥာဏ်မြှင့်တင်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဦး နှောက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်။ ဒီဆေးတွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြှင့်တင်ပေးသူအဖြစ် FDA ကအသိအမှတ်မပြုသော်လည်းအင်တာနက်မှတဆင့်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ ဒီဆေးတွေကိုဆီလီကွန်တောင်ကြားကနေရာမျိုးမှာပဲတွေ့နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ Alabama မှာရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုသူ့ရဲ့မီးဖိုချောင်စားပွဲကနေစီးလာတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တာ။ ဤအရာအားလုံးမည်မျှရရှိနိုင်သည်ကိုမြင်ရခြင်းမှာအရူးဖြစ်၏၊ သို့သော် FDA သည်သူတို့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ FDA က ပို၍ အားနည်းနေပါကဤဆေးဝါးအချို့မှရရှိသောကောင်းကျိုးများကိုမြင်ခြင်းသည်လည်းအရူးဖြစ်သည်။ “ Rewire” သည်ဤအယူအဆနှင့်လုံးဝနီးပါးနက်ရှိုင်းစွာမ ၀ င်ရောက်နိုင်သကဲ့သို့ငါကြည့်ရှုလိုသောဆန္ဒမှာလည်းနက်နဲနက်ရှိုင်းမှုကင်းမဲ့မှုကြောင့်ခံစားခဲ့ရသည်။
"Rewire" ကိုလည်းလမ်းမှာကြည့်ယူနည်းပညာနှင့်နည်းပညာ-related အလုပ်အကိုင်များဟာအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောင်စဉ်အပေါ်နေသောလူများအတွက်စုံလင်ခြင်းရှိနိုင်ပြီး, သင်အမှန်တကယ်စဉ်းစားတစ်ချိန်ကဒီထဲကိုရှာဖွေရေးအသိတွေအများကြီးစေသည်။ ငါကအတူရှိခဲ့သောပြဿနာသျောကဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်အခြားပုံပြင်များ၏ချွတ်ကောင်းစွာမကစားခဲ့ဘူးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာကျိန်းသေ၏အထွေထွေ concept ကိုမှသက်ဆိုင်ရာခဲ့သည် အမှောင် Net က တစ်ဖွဲ့လုံးအဖြစ်ပေမယ့်ဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ်ကြာမြင့်စွာလိုအပ်အဖြစ်ထက်ဝက်သာရှိသောကြောင့် "Rewire" တွင်ယင်း၏ပါဝင်နီးပါးသာကဆက်ပြောသည်တစ်ခုရူပါနဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။
ငါ့ကို "Rewire" ၏အနည်းဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲကြောင်းပြောဘို့ကလွယ်ကူမယ့် အမှောင် Net က ဒါကြောင့်ဝေးပေမယ့်ငါခရေပွင့နဲ့အတူကြောင်းပြောကြသည်။ ဒါကြောင့်ဤမျှလောက်အားပျော့မယ့်သောအကြောင်းပြချက်စိတ်ကူးများ၎င်း၏တင်ပြချက်အလွန်မညီမညာဖြစ်နေသောနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ porn စွဲခြင်းနှင့်သိမြင်မှုတိုးမြှင့်အပေါ်ပုံပြင်များတစ်ဦးချင်းစီ၏ပိုပြီးရှာဖွေရေးနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံဇာတ်လမ်းတွဲရာ၌ခန့်ထားပြီလိုနှင့်နည်းပညာတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောင်စဉ်အပေါ်သူတို့၏အကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်များလည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပြီးပြည့်စုံဇာတ်လမ်းတွဲရာ၌ခန့်ထားပြီလိမ့်မယ်။ အယူအဆများ၏ပေါင်းစပ်သျောအောင်မြင်ဖို့ဘူး, သင်ပိုမိုအတွေးအဆိုပါတင်ပြချက်ထဲသို့သွင်းထားမခံခဲ့ရအဘယ်ကြောင့်အံ့သြ left ပါတယ်။ ကျွန်မဖေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, သော်လည်း, ထိုပုံပြင်များအပေါငျးတို့သနေဆဲစိတ်ဝင်စားဖို့ခဲ့ကြသည်။ ကိုယ့်ကိုသူတို့မှာအားလုံးကောင်းတစ်လမ်းအတွက်ပရိသတ်ကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်ထင်ကြပါဘူး။
သငျသညျအဘယျထင်ခဲ့ဘူး "Rewire?" သငျသညျမြျှောလငျ့သောသူအချို့အကြောင်းအရာများဖြစ်ကြသည်ကဘာလဲ အမှောင် Net က အနာဂတျမှာစူးစမ်း? ကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်များအတွက်သင်တို့၏အကြံအစည်သိပါစေ!